HTC Wildfire E Lite bụ obere njedebe na gam akporo 10 Go Edition | Gam akporosis
Onyeka Onwenu | | HTC, Mobiles
The Taiwanese HTC ekwuputala ngwaọrụ ọhụụ ọhụrụ emere maka ahịa abụọ akọwapụtara, nke bụ South Africa na Russia na ụzọ izizi. Companylọ ọrụ ahụ kwadoro mwepụta nke HTC Wildfire E Lite, Ekwentị nlezianya mara mma maka ndị na-achọ ọnụ na ihe ndị bụ isi.
El HTC Wildfire E Lite bụ a variant nke ama mara HTC Wildfire E2, ọ bụ ezie na na nke a, akụrụngwa ya belatara yana ọnụahịa ya na-ebelata. Emeputa na mbụ na-egosipụta ekwentị dị ka HTC Ọchịchọ 20+ y HTC Desire 21 Pro, nke ikpeazụ bụ nke mbụ nwere njikọ 5G dị ka ọkọlọtọ.
1 HTC Wildfire E Lite, anya na-adọta obere njedebe
2 Batrị ga-adịru ọtụtụ awa nke ọrụ
HTC Wildfire E Lite, anya na-adọta obere njedebe
Ihe nlere a malitere site na itinye ihuenyo 5,45 nke nwere mkpebi HD (1.440 x 720 pikselụ), akụkụ ya bụ 18: 9 na IPS LCD bịara site na Gorilla Glass 5. Eku ahụ na-egosi nnukwu bezels ma n'elu na n'okpuru, nwere naanị ihuenyo 76%.
Ihe nhazi ahọpụtara maka HTC Wildfire E Lite bụ Helio A20, ihe eserese eserese nke soro ya bụ IMG PowerVR GE nke o zuru oke maka ezuru ya. Nchekwa ruru 16 GB, mana enwere ike ịgbasa ya site na MicroSD, RAM bụ 2 GB.
Ugbua na ngalaba ese foto ahụ Wildifre E Lite bịarutere na ihe nzụlite azụ abụọ, nke bụ isi bụ 8 megapixels, na-akwado VGA ka ọ bụrụ ihe mmetụta omimi, HDR pụtara maka mmelite na foto. Na ihu n'ihu n'etiti ị nwere ike ịhụ ihe mmetụta nke 5 megapixel selfie.
Batrị ga-adịru ọtụtụ awa nke ọrụ
The Taiwanese emeputa na-egosi na batrị bụ 3.000 mAh, na 250 awa nke njikere, ọ na-enye ohere 25 awa nke na-ekwu okwu na ekele MediaTek si A20 ọ bụ ike nke na-adịgide adịgide ihe karịrị 30 awa iji. Ihe kachasị mma banyere ya bụ na o zuru ezu iji zụọ ya na anwụ ngwa ngwa ga-adabere na ojiji ị nyere ya.
Nchaji ga-eme site na mmiri Micro USB ọdụ ụgbọ mmiri, nke ga-efu ihe karịrị otu elekere iji kwụọ ụgwọ, ebe onye nrụpụta na-atụ aro ihe dịka elekere 8 maka nke mbụ. Ihe dị mma bụ na ọ gụnyere ngwa ụlọ ọrụ iji chekwaa batrị n'oge anaghị eji ngwaọrụ.
El HTC Wildfire E Lite A kwadebere ya nke ọma na njikọta, ọ bụ ekwentị 4G, ya na Wi-Fi b / g / n, Bluetooth 5.1, GPS, ọ bụ Dual SIM ma ọ bịara na Micro USB maka ịkwụ ụgwọ. A na-etinye onye na-agụ akara mkpịsị aka n'azụ, dị ka a ga-asị na nke ahụ ezughi ọ na-agbakwụnye mkpọchi ihu.
Usoro bụ gam akporo 10 Go Edition, na-abịa na mmelite ikpeazụ nke ọnwa Disemba, ọ ka ga-ahụ ma n'ọdịnihu ọ ga-enweta mmelite dị elu. Ọ na-abịa na ngwa Go arụnyere, gụnyere YouTube Go, Gmail Go na ọrụ gam akporo ndị ọzọ dị ka Maps Go.
IKIRU 5.45-anụ ọhịa IPS LCD nwere mkpebi HD + (1.440 x 720 pikselụ) / akụkụ ruru: 18: 9 / Gorilla Glass 5
Nhazi Helio A20
Kaadị grafik IMG PowerVR GE
Nchekwa n'ime 16 GB / O nwere oghere MicroSD nke na - enye gị ohere ịgbasa ruo 128 GB
Gbanwee CAMERA 8 Isi ihe mmetụta / VGA Ihe omimi Sensor / LED Flash / HDR
N'ihu CAMERA Ihe mmetụta 5 MP
OS Gam akporo 10 Go Edition
UMUAKA 3.000 mAh
Njikọ 4G / WiFi / Bluetooth 5.0 / GPS / Micro USB / Dual SIM
NDỊ ọzọ Rear akara mkpisiaka agụ / Face Kpọghe
Mbibi na ibu ibu 147.86 x 71.4x 8.9 mm / 160 gram
El HTC Wildfire E Lite rutere n'otu nhọrọ agba, na agba ojii, ya mere, a na-achịkwa nhọrọ ndị ọzọ maka onye na-azụ ahịa. Ọnụ ego ekwentị ahụ bụ ZAR 1,549 (ihe dị ka euro 86 iji gbanwee) na South Africa yana Russia ọ ga-eri ihe ruru RUB 7,790 (euro 87).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC Wildfire E Lite bụ obere njedebe na gam akporo 10 Go Edition